AMBOASARY AMBOHIBOLA Nivadika ho fivarotana tany ilay tetikasa hanariana riam-potaka
Niantso mpanao gazety ary nitaraina mafy mikasika ny tranga mahazo azy ny komity mpiaro ny tany ao amin’ny fokontany Amboasary,
kaominina Ambohibola, distrikan’Ambohidratrimo omaly. Raha araka ny fanazavan-dRakotoniaina Jean de Dieu Donné izay nisolotena azy ireo mantsy dia any amin’io toerana io no kasain’ny Fitondram-panjakana hotanterahina ilay tetikasa hanariana ny riam-potaka avy amin’ny Canal C3 ka efa nisy ny lavaka be natao ao Amboasary. Ny nahavariana anefa rehefa nandeha ny fivoriam-pokonolona dia nivadika ho fanekena fivarotana tany indray ilay taratasy nosoniavin’izy ireo nanamarinana ny fahatongavany nanatrika izany izay tena loza mitatao ho an’ny fiarahamonina tokoa, tsy nandalo teo anivon’ny fokontany. Tsy ny fanjakana mivantana, hoy hatrany ity raim-pianakaviana ity no manao izany fa misy mpanelanelana ka tany mirefy 4 ha no kasain’izy ireo alaina. Nanambara ary ity solontenam-pokonolona ity fa sady tsy hanaiky ilay tetikasa fanariana riam-potaka izy ireo no tsy hivarotra ny taniny ihany koa, izay tetikasa manimba ny tontolo iainana sady manapotika ny asa fambolena izay foto-piveloman’izy ireo.